फेरि खुस्कियो ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद - नेपालबहस
गृहपृष्ठ › खोज/विशेष ›
फेरि खुस्कियो ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद
| १२:५०:१७ मा प्रकाशित
२९ पुष, काठमाडौं । सबैलाई थाहा थियो–प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवाद कम्मल ओढेर घीउ तन्काउने काइदा हो भनेर । यद्यपि उनले नेपाली जनतालाई लामो समय भ्रममा पारे । सधैं भारतीय संस्थापन पक्षको निकट बसेर तत्कालिन एमाले राजनीतिको केन्द्रीय भागमा हैसियत जमाएका ओली २०७२ सालको नाकाबन्दीताका भने कागताली परेर राष्ट्रवादी पगरी ओढ्न सफल भए । त्यसको कारण थियो – भाजपा सरकार र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ।
मोदीले ओलीलाई खासै महत्व दिएनन् । किनभने ओली कांग्रेस आई निकट व्यूरोक्र्याट्सको गूडलिस्टमा थिए । मोदीले वास्ता नगरेकैले ओली भाजपा सरकारसँग चिढिएका थिए । त्यसैले गर्दा ओली एक्कासी महान राष्ट्रवादी नेता कहलिए । नेपाली जनताले त्यसैको बदलास्वरुप ओलीलाई दुई तिहाई समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री नै बनाए । तर समयक्रममा काग र कोइली छुट्टिन्छ भनेजस्तै ओलीको सक्कली अनुहार देखिन थालेकै हो । चाहे त्यो आइफा प्रकरणमा होस् वा भारतीय तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्ने सन्दर्भ होस्, ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद फेरिपनि उदांगिएकै हो ।
प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि भारतीय संस्थापन पक्षले नगनेको भन्दै ओली चीनसँग लहसिन खोजेका थिए । अघिल्लो कार्यकालमा त उनको चीनसँग विषेश सम्बन्ध नै रह्यो । तर दोस्रो इनिङमा भने ओली झस्किन पुगे । जब चीनले ओलीको ठाउँमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाउने तानाबुना बुन्यो र त्यसको छनक उनले पाए , त्यसपछि त ओली यूटर्न भए ।
चीनले आफूलाई प्रयोग मात्र गर्न खोजेको बुझाई ओलीको भएपछि भने फेरि उनको झुकाव भारततिरै ढल्कियो । यसका लागि ओलीले भारतीय गुप्चर संस्था रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको सहयोग लिए । गोयललाई नेपाल बोलाएर उनले मध्यरातमा आफ्नो सरकारी निवासमा घण्टौं छलफल गरे । अनि उनको सम्बन्ध संस्थापन पक्षसँग बलियो बनाउने अभियानको थालनी भयो ।
जी न्यूजको दुईवटा च्यानललाई ओलीले हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा अन्तर्वार्ता दिए । अन्तर्वार्ता सुन्दा लाग्थ्यो ओली त फेरि पनि राष्ट्रवादी धार फर्काउने अभियानमा जुटिसकेकाछन् । सोझा जनता फेरिपनि भ्रमित हुने भए । तर ओलीको राष्ट्रवादको धोती त्यतिबेला खुस्कियो जब जी न्यूजका प्रधानसम्पादक सुधीर चौधरीले हिजो राति एउटा यस्तो सनसनीपूर्ण समाचार प्रशारण गरे, जुन नेपाल र नेपालीको शीर छेदन गर्ने थियो ।
त्यसपछि त ओलीले यति बलियो अवस्थामा रहेको अनुभूति गरे की संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । लोकतन्त्रको चीर हरण भएको दुनियाँले भन्दैछ । तर लोकतन्त्रको ठेकेदारको रुपमा आफूलाई दाबी गर्ने भारतीय सरकार भने यो मुद्धामा मौन छ । कारण अहिले ओलीलाई चिढ्याउने पक्षमा भारतीय संस्थापन पक्ष रहेन ।
त्यसैको बलमा ओलीले भारतीय सञ्चारमाध्यममार्फत आफ्नो राष्ट्रवादी छविलाई फेरि पुनर्उन्थान गर्न खोजे । त्यसका लागि उनको छनोट यस्तो सञ्चारमाध्यम बन्यो जसलाई समुचा भारतमा गोदी मिडिया अर्थात मोदीको काखे मिडिया भनेर चिनिने जी न्यूज च्यालन बन्यो । यसका लागि ओलीले तिनै गोयलसँग सम्पर्क गराउने सूत्रको प्रयोग गरे ।
जी न्यूजको दुईवटा च्यानललाई ओलीले हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा अन्तर्वार्ता दिए । अन्तर्वार्ता सुुन्दा लाग्थ्यो ओली त फेरि पनि राष्ट्रवादी धार फर्काउने अभियानमा जुटिसकेका छन् । सोझा जनता फेरिपनि भ्रमित हुने भए । तर ओलीको राष्ट्रवादको धोती त्यतिबेला खुस्कियो जब जी न्यूजका प्रधानसम्पादक सुधीर चौधरीले हिजो राति एउटा यस्तो सनसनीपूर्ण समाचार प्रशारण गरे, जुन नेपाल र नेपालीको शीर छेदन गर्ने थियो । चौधरीले ओलीको अन्तर्वार्ता लिएको भोलिपल्टै सगरमाथाको बेसक्याम्पमा पुगेर अर्काे रिपोर्टिङ गरे , जसमा उनले माउण्ट एभरेष्टमा भारतको दाबी रह्यो । उनले सगरमाथाको पहिलोपटक म्यापिङ गर्ने राधाकृष्ण सिकन्दरकै नाममा अब नामाकरण गर्नुपर्ने तर्क गरेकाछन् । साथै, यसका लागि आफूले अब अभियानकै थालनी गर्ने उद्घोष गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइमा परेका चौधरीले यस्तो दाबी गर्दा नेपाल सरकार मौन छ । जी न्यूज त्यही च्यानल हो , जसले ओली र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीबीच गलत समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । विष कन्याले ओलीलाई लठ्याएको भन्दै लामो समाचार प्रस्तुुत गरेको थियो । आखिर त्यही च्यानलले ओलीको अन्तर्वार्ता लियो र सगरमाथामा पुगेर समूचा नेपालको हुर्मत लिने गरि समाचार संम्प्रेषण गरेको छ । यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छ की ओलीको राष्ट्रवाद केवल जनता भ्रमित पार्ने फण्डा मात्रै हो ।
आयोगले शुक्रबार नेकपाका दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने १७ मिनेट पहिले
नेताहरु सत्तादोहनले रनभुल्ल: भट्टराई १ घण्टा पहिले
प्रचण्ड–माधव समूहको निश्कर्ष: ओलीले संकटकाल लगाउन सक्ने १ घण्टा पहिले
आगामी निर्वाचनमा प्रचण्ड–माधव समूहको १० सिट पनि आउदैन : प्रधानमन्त्री ओली १९ घण्टा पहिले
माइतीघर घेरे पूर्व सांसद्हरुले १ दिन पहिले
तीनमहिना भित्र सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोपः ओली १ दिन पहिले
प्रधानमन्त्री कपः आर्मीद्वारा वाग्मतीलाई २३० रनको लक्ष्य ८ मिनेट पहिले
लामा नङ पालेर नाम उच्च पार्ने धोको १३ मिनेट पहिले
अर्बपति क्लबमा पुग्यो कुमारी बैंक ! लिडर बैंक बन्ने यात्रामा १८ मिनेट पहिले
सिटिजन्स बैंकको सभाले पारित गर्याे तिनाउ मिसनलाई प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव, (१००ः९६)कायम गरियाे शेयरमूल्य अनुपात २२ मिनेट पहिले
भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन माघको अन्तिम साताबाट शुरु हुँदै ४२ मिनेट पहिले
चार करोडको लागतमा ध्यानशालाको निर्माण सम्पन्न ५१ मिनेट पहिले
एक नम्बर विकास बैंक बन्दै गरिमा विकास बैंक ! छोटो इतिहासमै ठूलो उछाल ५६ मिनेट पहिले
श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सको शेयर रजिष्ट्रारमा सिद्धार्थ क्यापिटल नियुक्त ५८ मिनेट पहिले
फुजी स्याउप्रति जुम्लाका किसानकाे आकर्षण ५८ मिनेट पहिले
श्रीस्वस्थानी व्रतकथाकाे महत्व: महादेव जस्तै पति पाऊँ १ घण्टा पहिले
सङ्गीत अभ्यास र साधनालाई विश्राम दिएन गायक रामजी नेपालीले १ घण्टा पहिले
महामारीले देशभरका ४० प्रतिशत इँटा उद्योग बन्द ५ घण्टा पहिले
अब विघटनविरुद्धको रिटमा बहस गर्ने समय १५ मिनेट : जबरा २२ घण्टा पहिले
अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल पक्राउ ८ घण्टा पहिले
आजदेखि एक महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत एवं माघस्नान शुरु ९ घण्टा पहिले
ट्रान्सजेन्डर नेपाली मोडल अन्जली हलिउडमा डेब्यू गर्दै ८ घण्टा पहिले
देशभर २८३ कोरोना संक्रमित थपिए २१ घण्टा पहिले
बिना शल्यक्रिया मुटुरोगको नेपालमै उपचार २१ घण्टा पहिले
चन्द्रनहर मर्मत सम्भार नहुँदा किसानहरु चिन्तित २३ घण्टा पहिले
करिना दोश्रो पटक आमा बन्ने तयारीमा २ दिन पहिले
अस्ट्रेलियाले फाइजरको भ्याक्सिनलाई दियो अनुमति ३ दिन पहिले
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक र क्लियरिङ्ग हाउसबीच सम्झौता २ दिन पहिले
नयाँ प्रकारविरुद्ध मोडेर्नाको खोपले काम गर्ने : अमेरिकी विज्ञ २ दिन पहिले
सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका गर्न अपिल ६ दिन पहिले
आत्मवृत्तान्त जापानी भाषामा छापिँदै २ दिन पहिले
लघुवित्तको संस्थापक साढे ४२ हजार कित्ता शेयर बिक्रीमा (विवरणसहित) ३ दिन पहिले
युवकलाई खुँडा प्रहार गरी हत्या गर्ने तीन जना पक्राउ २३ घण्टा पहिले
अमेरिकामा ट्वीटर र ट्रम्पबीच विवाद : शेयर मूल्यमा ७ प्रतिशतले गिरावट २ हप्ता पहिले
दाहाल–नेपाल समूहले माघ २८ गते काठमाडौंमा फेरि शक्ति प्रदर्शन गर्ने ३ दिन पहिले
पुनः जन्म पाएको ११ चिनियाँ श्रमिकको उद्धार भएपछि महशुस १ दिन पहिले
बीएचएम पढेका मानिस बेरोजगार हुँदैनन्:-रचना थापा, निर्देशक २ हप्ता पहिले
लघुवित्तमा रोजगारीको अवसर, आजै दिनुहोस् आवेदन १ हप्ता पहिले
यी हुन् एयरपोर्टबाट पक्राउ परेका नक्कली पीसीआरधारी ४ हप्ता पहिले
सिन्धुलीगढी युद्धमा प्रयोग गरिएका घरेलु हतियार सेनालाई बुझाउने क्रम जारी ३ हप्ता पहिले
लगानीको अवसरः ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावरको आईपीओ माघ २३ गतेदेखि निष्कासन हुँदै ४ दिन पहिले
सेतीमा पानीको बहाव उच्च : सुरक्षा निकायलाई ‘हाइअलर्ट’ मा बस्न निर्देशन ६ महिना पहिले
ओली समुहबाट भीम रावललाई कारबाहीको सिफारिस ३ हप्ता पहिले
डिस्को र लाउञ्ज बारका साहुबाट कास्की प्रहरीको बचाउ, यस्तो छ उनीहरुको खण्डन विवरण १० महिना पहिले
‘जनकपुर–जयनगर रेल्वे’ माघ अन्तिमदेखि सञ्चालनमा आउँदै १ हप्ता पहिले